ढोगभेटमा आउँदा विवाह नै बदर ! – Pahilo Page
ढोगभेटमा आउँदा विवाह नै बदर !
८ असार २०७९, बुधबार २०:०० 102 पटक हेरिएको
कम उमेरमा विवाह गर्ने चलनले पश्चिम मकवानपुरका राक्सिराङ, कैलाश र मनहरीलगायत गाउँपालिका र सो क्षेत्र आक्रान्त छ । यद्यपि, बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेपछि मनहरी गाउँपालिकाका बालबालिकाहरुले सचेत भएर बालश्रम र बाल विवाहविरुद्ध अभियान चलाएका छन् । त्यसबाट यस्ता घटनामा सामान्य कमी आएको अनुमान गरिएको छ ।
मनहरी र कैलाश गाउँपालिकाका बालबालिकाबीच भएका कतिपय बाल विवाहलाई बालबालिका, स्थानीय सरकार, सिविन हेल्पलाइनलगायत निकायहरुको समन्वय र सहजीकरणमा असफल बनाइएको छ । मनहरी ९ की १५ वर्षीया बालिका र कैलाश ७ कोथलीटारका बालकले केही दिनअघि भागेर विवाह गरेका थिए ।
आफ्ना छोराछोरीले भागेर विवाह गरेको थाहा पाएपछि माइती पक्षले ज्वाइँसहितका नातेदारलाई ढोगभेटका लागि मनहरी बोलायो । त्यसरी भागेर जाने जोडीलाई दुवै परिवारमा स्वीकार्य भएमा माइती पक्षले बोलाएर ढोगभेट गराउने र सम्बन्ध सुधार गर्ने परम्परा छ ।
ढोगभेट गर्न आएका नवदुलाहा र दुलहीको कानून विपरित भएको विवाहलाई गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती, वडाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ, सिविन बाल हेल्पलाइन, मनहरी पालिकास्तरीय बाल सञ्जालका बालबालिका मिलेर सम्झाई बुझाई विवाह बदर गर्न लगाइएको हो । कानूनतः २० वर्ष पूरा नभएसम्मका सबै विवाह अवैधानिक हुन् ।
यसअघि १८ वर्षमै विवाह हुने गरेकामा कानूनमै उमेर हद २ वर्ष बढाएपछि बाल विवाह र कानून उल्लंघनका सयौँ घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसबीच संसदमा समेत विवाहको उमेर हद घटाउनेबारे बहस सुरु भएको छ । मकवानपुरको चेपाङ र तामाङ समुदायमा बाल विवाहको परम्परा अन्यत्रभन्दा बढी पाइन्छ ।